Rakuten यसको आफ्नै cryptocurrency शुरूआत - Blockchain समाचार
Rakuten यसको आफ्नै cryptocurrency शुरूआत
मा 2016, जापानी ई-वाणिज्य विशाल Rakuten Bitcoin-Bitnet वालेट प्राप्त, जसमा उनले पहिले निवेश थियो, र आफ्नै blockchain-प्रयोगशाला संगठित. यो कारोबार पहिलो उपलब्धिहरू मध्ये एक यसको आफ्नै Rakuten सिक्का cryptocurrency को सुरूवात छ, जो बोनस कार्यक्रम Rakuten सुपर को blockchain बिन्दुहरू स्थान्तरण. नयाँ cryptocurrency जारी मिति अहिलेसम्म ज्ञात छ.
सृष्टिको बारेमा “असीम मुद्रा” बार्सिलोना मा मोबाइल विश्व कांग्रेस समयमा घोषणा सीईओ Rakuten Hiroshi Mikitani. यसरी यो संसारभरि अधिक ग्राहकहरु आकर्षित हुनेछ कम्पनी अपेक्षा, कम आयोगहरु, मुद्राहरू को विनिमय मा सहित. तर यो सबै नवीनता को पहिलो Rakuten लोयल्टी कार्यक्रम revitalize गर्न आह्वान गरिएको छ, जो उपभोक्ताहरु अहिले रूपमा सन्दर्भमा हुनेछ “को blockchain लागि योगदान।”
माथि 15 सुपर को वर्ष अंक बोनस कार्यक्रम, एक भन्दा बढी ट्रिलियन “सुपर अंक” जम्मा गरिएको छ, जो बराबर $ 9.1 अरब, र अब प्रयोगकर्ता आफ्नो बचत लागू गर्न थप अवसर हुनेछ. Rakuten सिक्का कम्पनी सबै सहायकहरूले मा शुरू गर्न योजना छ, फ्रान्सेली व्यापार मंच PriceMinister सहित, जो हाल rebranded छ र Rakuten पुन: नामाकरण गरिनेछ, र अमेरिकी cashback सेवा Ebates, लागि कम्पनी द्वारा प्राप्त $ 1 अरब मा 2014.
Mikitani कि जोड Rakuten “अमेजन देखि धेरै फरक छ”: “हाम्रो कार्य व्यापार व्यवसाय को नेटवर्क पुन: सिर्जना गर्न छ. हामी ग्राहकबाट तिनीहरूलाई छोड्ने चाहँदैनन्, तर, त्यसको विपरीत, हामी एक उत्प्रेरक हुने प्रयास. हाम्रो दर्शन समाज को हात मा शक्ति दिन छ, र बस छैन सामाग्री लाभ प्रदान गर्न. ” पनि कम्पनी टिप्पणी कि “मान्छे कहीं पायो सकिँदैन केही कुराहरू चाहनुहुन्छ”. मात्र जापानी बजार मा Rakuten बारेमा एकतामा बाँध्ने 44,000 स्टोर, संसारभरि प्रयोगकर्ताहरूको अरबौं नम्बर, र लागि कम्पनीको राजस्व 2017 थियो $ 8.8 अरब.
मोबाइल विश्व कांग्रेस मा आफ्नो भाषण समयमा, Mikitani कम्पनी को अन्य योजना बारे भने. खासमा, थप भएको लोयल्टी कार्यक्रम विस्तार गर्न, पूर्ण-fledged मोबाइल अपरेटर बन्न Rakuten अपेक्षा र आन्तरिक मामिला र जापान को संचार मंत्रालय गर्न अनुरूप आवेदन लागू गर्न तयार छ (देखि 2014, Rakuten को Rakuten मोबाइल ब्रान्ड अन्तर्गत भर्चुअल सेलुलर अपरेटर छ). पनि, सेवा यसको आफ्नै दूत यसको गतिविधि वृद्धि हुनेछ Viber, जो पहिले नै आज अर्ब दर्ता प्रयोगकर्ता छ. सायद तपाईंको आफ्नै blockchain र cryptocurrency सिर्जना को अनुभव को दूत स्थान्तरण गरिनेछ. को समान योजना विचार तार, निकट भविष्यमा मुख्य वित्तीय बजार बैंकहरू हुनेछैन, तर तत्काल दूत.
लेख्न: रिचर्ड Abermann
नयाँ TWITTER: स्टक चुनाव, ...
अघिल्लो पोस्ट:LitePay को सुरूवात मा नियुक्त दिन ठाउँ लिन छैन
अर्को पोस्ट:कसरी Intraday cryptotrading मा कमाउन?